Shiinaha ayaa ka warbixiyay kiiskii ugu horreeyay ee bini'aadamka H10N3 hargab shimbireedka - Cradle View
Shiinaha ayaa diiwaangeliyay kiiskii ugu horreeyay ee ifilada shimbiraha
Qof degan Zhenjiang, Gobolka Jiangsu ayaa isbitaalka loo diray April 28th oo markii dambe laga helay H10N3 on May 28th. Xogtan waxaa bixiyay komishanka caafimaadka Si kastaba ha ahaatee, guddiga ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan sida ninkaasi uu ku dhacay.
Xaaladiisa caafimaad hadda waa ay degan tahay, waxaana uu ku guda jiraa sidii looga saari lahaa. Baadhitaan tifaftiran oo degdeg ah oo ay ku lug leeyihiin dadka ay isku dhow yihiin, saaxiibadiisa, iyo qoyskiisa ma helin kiisas kale, ayay NHC sheegtay. Ma jiraan kiisas kale oo infekshanka aadanaha ah H10N3 ayaa laga soo sheegay gobolka, ama caalamka, ayay raacisay.
Maxay tani uga dhigan tahay Koonfurta Aasiya?
Hadda waa xaqiiqo la hubo in COVID-19 uu ka yimid Wuhan, Shiinaha ka dib 4 Dhakhaatiir waaweyn ka marag kacay a shirka ku saabsan asalka COVID-19. Waxaad ka daawan kartaa muuqaalka oo dhan halkan: https://www.youtube.com/watch?v=B3LuOhtrq4M&t=4751s
Iyada oo indhihii dunidu ay hadda u jeedaan Shiinaha ka dib COVID-19, waxay u muuqataa inay iska caddahay in isla jawaabta la siin doono Shiinaha ee ku saabsan kiiskan cusub ee hargabka shimbiraha. Sida laga soo xigtay wakiilada caafimaadka ee PRC iyo saraakiisha ka socda Zhenjiang, looma baahna cabsi ama rajo beel maadaama xaaladdu hadda gacanta lagu hayo.
La soco wixii ku soo kordha mustaqbalka
Tags: asia news wararka Asia hargabka shimbiraha H10N3 news dunida
Gelitaan Hore Hajimete no Gal Season 2 May wuu ka Dhawyahay inta aad u malaynayso
Gelitaanka Xiga Kaguya Sama Season 3 Taariikhda Siideynta + Jilayaasha Cusub